mushaTURKEYDunhu reMarmara41 KocaeliZvizvarwa zvemuKocaeli Zvakafadzwa ne Mobile Stops
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, GENERAL, HIGHWAY, Tire Wheel Systems, Dunhu reMarmara, TURKEY 0
kocaelide vagari vanogutiswa neyekuchaira kwemaoko
Nzvimbo dzekuma mobile dziri kuvakwa paSalim Dervişoğlu Street, iri imwe nzira kuenda kuD-100 nzira huru, uko kune zvifambiso zvevoruzhinji kuenda kumatunhu eKocaeli's Karamürsel, Gölcük neBaşiskele. Vagari vemo vanoratidza kugutsikana kwavo kubva kuchiteshi chitsva chemahara chakavakirwa padivi peAdnan Menderes Overpass muIzmit, izvo zvinoita kuti zvive nyore kune vanenge vatakura kutora nekutora vanhu vese mukufambisa. Yekutanga yenharembozha inomira kuvakwa neKocaeli Metropolitan Municipality munzvimbo nhatu dzinopedzwa, nepo kuvakwa kweMimar Sinan neTurgut Özal Kupfuura mapurufu.
RUDZIKI RWEMAHARA KUSHANDWA KWEMAKOKO
Kuwedzera Salim Dervişoğlu Street mumatanho, Kocaeli Metropolitan Municipality iri kuvaka zvitsva zvekufambisa mumugwagwa. Adnan Menderes Kupfuura kwakapera uye kupihwa kuvagari. Nekutenda nharembozha ichangovakwa, Başiskele, Gölcük uye Karamürsel mota dzekufambisa dzinotakura vanhu dzinogona kuburitsa uye kutambira vapfuuri. Zvizvarwa zvemunyika zvinogona kupinda muzvifambiso zveveruzhinji zvinoreva kuti ivo vanogutiswa nenzvimbo itsva dzekufambisa. Mukati mechikamu chemabasa anoitwa nezvikwata zveDhipatimendi reSainzi, kuvaka kwemahedhifoni kwakavakirwa padivi peMimar Sinan uye Turgut Özal Kupfuura Bhiriji kunopfuurira.
DA TINODA BASA RAKAWANDA REMAHARA KUTI TINOGONESA ”
Levent Karagöz (40) akataura kuti aishanda kuBaşiskele uye aishandisa Halkevi chiteshi paaifamba pakati pe İzmit neBaşiskele. Izvi zvakakonzera traffic traffic. Zvaive zvakanaka kugadzira muhomwe. Tinokorokotedza matare edu nenyaya iyi. Nekudzidza uku, dunhu iri rakagara rakajairika uye rakawedzera kutaura. Turafiki huru pano haina kukundikana. Nebasa iri, tinogara tichiita basa rekufambisa. ”
"KUTANGA NGUVA YEKUTI NDAKADAI uye ndaifarira"
Retirement Cevdet Göçlü (74) akataura kuti akashandisa nharembozha kekutanga uye akaifarira. "Nharembozha itsva yaive yakanaka chaizvo. Tsaona dzemotokari dzinogona kuitika pano dzakadzivirirwa. Nechidzidzo ichi, vaviri vanofamba vanogona kukwira mota zviri nyore uye mota dzinogona kusimuka nekumira nyore. Yaimbove iri pasi pebhiriji uye mota dzaive dzakamira pakati pemugwagwa. Iye zvino vaviri vaifamba nemabhazi vasunungurwa. Ndinoda kutenda Metropolitan Municipality ”.
Vagari vanoseka pazviso zveKadikoy-Kartal Metro 03 / 09 / 2012 Metro AZVAKAITIKA Faces kuseka 17 muna August kubudikidza Prime Minister Erdogan akaita hwomukova "Gokova - Kartal Metro" muupenyu vatakurwi kufamba mufaro mumiririri waMwari. Kugadzwa pevhu motokari chete kubva kutaura asvika muna 32 maminitsi Gokova Kartal Metro bekliyor.istanbul kurutivi Anatolian divi vanhu Lounging Kandira Transportation Inc. Press uye Public Relations vakagamuchira maonero ari Chief pevhu vatakurwi. Pano meso vatakurwi Gokova - Kartal Metro, Tevfik Eraslan (bhenga) kubatwa nenzira mukana Ndinofara zvikuru nevana vangu. Ndakanga ndichityaira nokuti dzimwe nzira dzekutakura vanhu dzakanga dzisina kukodzera kumhuri. Ndakapedza nguva ndichiedza kuwana motokari yemoto için
New Ankara YHT Station Inotungamirira Dolup Citizens 01 / 11 / 2016 New Ankara YHT Station inomisa Dzimba dzeVaduku Dzichigutsikana: New Ankara YHT Akaisa vechidiki, vakwegura, mudzidzi, mupurisa akaunganidzwa kubva kumativi ose. Vagari vakapa basa rakakwana kumushandi mukuru weMutungamiri Erdogan akazarura Chikwata cheAnkara YHT chakarongwa ndege dzakarongwa. Vatasvi vauya kuAnkara YHT Station kuti vagadzire matanho emuguta racho vakati vakagutsikana nebasa rakapiwa. "The zvenyika Ankaralılar nokuda YHT yemapurisa iri pakati pakukura mapurojekiti," chiteshi Ndicho pachena chinoratidza kuti kuguma panguva Turkey, "akati. Vagari musi ravarwi itsva yakavakwa isingatsiki Ankara Train Station, Ankaray, kuti kwakabatana kuchinjwa kuna BAŞKENTRAY uye Keçiören Metro inofadzawo kuva nayo.
Vatyairi vemafaro vanofara zvikuru nemoto mutsva yemotokari 24 / 06 / 2014 Vatyairi vemafaro vanofara zvikuru nemutsara uyu mutsva: Nzira itsva, iyo yakadzorerwa zvakare vhiki rapera, inofasirwa nevatasvi vemabhiza pamwe chete nevaya vanoda kushanyira Uludağ. Iyo itsva mutsara yemotokari ndiko kusarudzwa kwevanhu pamwe chete nemapoka emabhasikoro. Teferrüç inotora mweya wemapoka avo vanoda kuongorora vhiki yevhiki nekuita mitambo. Vatyairi vengoro pamotokari kuenda kuUludağ, vachitaura kuti matambudziko ekare haasati atenda masuwa. 10 TL mari yakawanda yebhazikoro, mapoka emabhasikoro, "mutambo wakare wemotokari yevanhu 40 vaitora, taitofanira kumirira hafu yeawa apo imwe imwe yazara." Iye zvino tinokwanisa kukwira imba neunhu pabhazikoro kuenda kuSarıalan kunze kusindira, "akadaro.
Inogutsikana sei mugari ane High Speed ​​Train? 03 / 10 / 2012 Chokutanga, Ankara-Eskişehir uye zvakare Ankara-Konya inowanikwa mune zvekupedzisira maongororo evanhu veYHTs akaisa mubasa zvibereko zvinonakidza zvakabuda. Ngarava yakatanga kuva nenguva yegoridhe ne High Speed ​​Trains (YHT). Chokutanga, Ankara-Eskişehir uye zvakare Ankara-Konya mutsara YHTs akaiswa mubasa. Gore rakatevera, apo Marmaray uye Eskişehir-İstanbul YHT mutsara yakarongwa kuiswa mubasa, kuvaka kweAnkara-Sivas YHT mutsara iri kuenderera mberi. Izvo zvose zvinotungamirirwa neAnkara-İzmir neBursa mapurogiramu ezvidzidzo zvepamusoro zvakapera. Kunyange zvazvo kuvakwa kwezvirongwa izvi kwakarongeka kutanga nokukurumidza, kuongororwa kwevoruzhinji kwevoruzhinji kweHurumende yekutakura, Maritime Affairs uye Communications kwaYHTs kwakaunza migumisiro inofadza. Research ...
Inogutsikana sei mugari YHT'den? 07 / 10 / 2012 Chokutanga, Ankara-Eskişehir uye zvakare Ankara-Konya inowanikwa mune zvekupedzisira maongororo evanhu veYHTs akaisa mubasa zvibereko zvinonakidza zvakabuda. Ngarava yakatanga kuva nenguva yegoridhe ne High Speed ​​Trains (YHT). Chokutanga, Ankara-Eskişehir uye zvakare Ankara-Konya mutsara YHTs akaiswa mubasa. Gore rakatevera, apo Marmaray uye Eskişehir-İstanbul YHT mutsara yakarongwa kuiswa mubasa, kuvaka kweAnkara-Sivas YHT mutsara iri kuenderera mberi. Izvo zvose zvinotungamirirwa neAnkara-İzmir neBursa mapurogiramu ezvidzidzo zvepamusoro zvakapera. Kunyange zvazvo kuvakwa kwezvirongwa izvi kwakarongeka kutanga nokukurumidza, kuongororwa kwevoruzhinji kwevoruzhinji kweHurumende yekutakura, Maritime Affairs uye Communications kwaYHTs kwakaunza migumisiro inofadza. Research ...
Vagari vanoseka pazviso zveKadikoy-Kartal Metro
New Ankara YHT Station Inotungamirira Dolup Citizens
Vatyairi vemafaro vanofara zvikuru nemoto mutsva yemotokari
Inogutsikana sei mugari ane High Speed ​​Train?
Inogutsikana sei mugari YHT'den?
Vatambi veCrimea havagutsikani nebhazi rebhazi
Eskişehir kuti atange YHT basa muKonya yakafadza mutorwa
Railway Yakagadzirwa Nyika Yakagutsikana
Sincan-Kayaş Suburban Expeditions Inofanirwa neVa Capitalists
Vanhu vanobva kuKadikoy-Kartal Metro, iyo yekutanga yakawana vanhu